Visualizer ọnya akpịrị: njirimara na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbanwe ihu igwe na-ebute nnukwu nsogbu zuru ụwa ọnụ nke anyị ga-eche ihu na narị afọ a. Otu n'ime nsogbu ndị a bụ mmụba na ike nke oke ihu igwe. Otu n'ime ihe ndị a jọgburu onwe ya bụ ụkọ mmiri ozuzo. Iji nyochaa ụkọ mmiri dị n’ala anyị, a unwu ikiri.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma maka ụkọ mmiri ozuzo na uru ọ na-enye.
1 Mmetụta ọjọọ nke ụkọ mmiri ozuzo
2 Ofdị ọkọchị
3 Ekiri Ekiri
4 Mkpa nke onye na-ekiri okochi
Mmetụta ọjọọ nke ụkọ mmiri ozuzo
Ihe mbu anyi kwesiri imata bu nkowa banyere unwu. E ji ọkọchị dị n'otu mpaghara nwere ogologo oge onye mmiri ozuzo ya dị ala karịa. Taa enwere ụkọ mmiri ozuzo na mmiri dị ukwuu karịa na mbụ. Mmụba a na ugboro na ike nke ihe a na-egosi mmetụta na-adịghị mma nke mgbanwe ihu igwe nwere na mgbanwe nke ikuku.
Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nsogbu a bụ ọdachi ndị na-akpata ọ na-akpata, ọ na-egosi nha anya mmiri na mmiri na-amalite ịpụta na ọkwa dị ala. Ihe a niile na - ebute mmetụta ndị na - adịghị mma nwere ike ịdị njọ karịa nke ndị oke ifufe na - agba kemgbe ha siri ike ịkọwa na ịtụ anya. Ekwesiri iburu n’uche na ndi mmadu nwere ngwa oru banyere ike ikwuputa oke mmiri ozuzo. Otú ọ dị, ụkọ mmiri na-esi ezigbo ike nchịkwa.
Iji mee nke a, a rụọla ọrụ iji nweta onye na-ekiri mmiri ozuzo. Ọrụ inyocha ogo na nsonazụ nke ụkọ mmiri ozuzo na-esikarị mgbagwoju anya ebe ọ bụ na ụkọ mmiri ndị dị otú ahụ na-etolite nwayọ na n'ụzọ dị iche na mpaghara ọ bụla anyị na-amụ. A na –emekarị ya ọkachasị ụkọ mmiri ozuzo na-adịghị ala ala na mpaghara. Ihe a niile na - ebute enweghị aha mmiri.
A na-ekewa oke ihe omimi ihu igwe dị ka mmụba nke okpomọkụ, evaporation, mmiri ozuzo, transpiration, runoff na data anakọtara site na mmiri ala na mpaghara ụfọdụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkọpụta ụkọ mmiri ozuzo, a na-eji akara ọkọlọtọ ọkọlọtọ ma ọ bụ akara nrịba nkwụ nke nkwụ. Site na indices ndị a, a ga-enyocha mpaghara niile emetụtala nke ọma.
Ka anyi lee ihe bu udiri udiri udiri mmiri di:
Meteorological: Na ụdị a, nkezi mmiri ozuzo dị ala karịa nke nkịtị, mana ekwesighi ịbụ enweghị mmiri ozuzo.
Ugbo: ego nke mmiri dị na ala nke dị mkpa maka ihe ọkụkụ dị obere. Ya mere, a na-emetụta ihe ubi.
Mmiri: Ọ bụ nke na-eme mgbe mmiri na-ebupụta n’elu ala na n’okpuru ala dị ala karịa nke nkịtị.
Akụ na ụba: ọ bụ nke na-emetụta ọrụ mmadụ.
E nwere ụzọ ndị ọzọ iji kọwaa ụdị ọkọchị dị iche iche dịka ọnọdụ na oge. Ebe anyị na-ahụ ndị na-esonụ:
Nwa Oge: ọ bụ nke a na-ahụ n’ọzara ọzara ebe mmiri na-ezo dị. Iji maa atụ, anyị nwere ọzara ebe enweghị mmiri ozuzo dị mma.
Oge: na-eme tupu oge a kara aka.
Amaghi ama: Ọ na-anọchi anya inwe oge dị mkpirikpi na oge ụfọdụ. Ha siri ike ịkọ n'ihi oge.
-Ahụghị Anya: Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị ịtụnanya kemgbe, ọ bụ ezie na mmiri ozuzo na-ezokarị, mmiri na-amịpụ ngwa ngwa.
Anyị maara na ụkọ mmiri na-akpata usoro mmiri ozuzo a na-adịghị ala ala na mpaghara. Ikuku na-agbakarị ma na-eduga na ebe dị elu. Nke a na-ebelata iru mmiri ma na-etolite obere ego nke igwe ojii. Ebe enwere igwe ojii pere mpe, mmiri ozuzo na-ebelata. Dika onu ogugu mmadu na abawanye, mmiri choro na abawanye. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a mmetụta nke okpomoku zuru ụwa ọnụ, oke ọkọchị nwere ike bụrụ na ọ ga-adịkarị njọ ma sie ike.
Maka nke a, Nnukwu Council of Scientific Investigations (CSIC), na mmekorita ya na Aragonese Foundation for Research (ARAID), na Steeti Meteorological Agency (AEMET) weputara sistemu iji lebara okochi anya n’oge. A maara ya site na aha onye na-ekiri okochi na ebumnobi bụ iji mezuo nlekota na-aga n'ihu iji nwee ike ịtụ anya ihe omume a ngwa ngwa.
Ebe ọ bụ otu n’ime ihe na-akpata mmebi ugbo, akụ na ụba na gburugburu ebe obibi, mmetụta ya pụtara ìhè mgbe ogologo oge nke obere mmiri ozuzo dị. O siri ezigbo ike ịkọwapụta ihe mbido ya, oge ya na njedebe ya bụ. Yabụ, ịmepụta ikiri oke ọkọchị nwere ike inye ozi mba niile nke emelitere kwa izu. Ihe bụ ihe ọzọ, na-enye gị ohere ịkpọtụrụ akụkọ ihe mere eme banyere ụkọ mmiri ozuzo kemgbe 1961.
Usoro a nwere ike ịhazi ozi niile enwetara na oge site na netwọkụ AEMET nke ọdụ ụgbọelu na-akpaghị aka na SIAR (Agroclimatic Information System for Irrigation) nke Ngalaba Ugbo, Ugbo na Azụ. N'ihi ozi a, enwere ike ịgbakọ ihe ngosi abụọ na-egosi na ọnụnọ nke oke a dị egwu. N'ezie, ihe ngosi na-adabere na data ọdịda mmiri ozuzo. Ha bụ ihe ngosi nke agwakọtara yana ozi banyere iru mmiri ihu igwe.
Mkpa nke onye na-ekiri okochi
Ihe dị mkpa nke ngosipụta mmiri ozuzo a bụ na ọ na-ada ada igosipụta anomali nke indices abụọ ahụ gbasara ọnọdụ nkịtị na mpaghara ọ bụla nke ókèala ahụ. N'ebe niile ebe onodu mmiri ozuzo, ileba anya nwere ike iru wepụ ozi ma gosi ogologo oge ya na ike ya. Ha bụ ihe ngosi nke na-enye ohere ịtụle ọtụtụ data iji gosipụta mmetụta ndị nwere ike ịpụta na ọnọdụ ihu igwe a dị oke egwu. Ihe a niile na-enye ohere iji melite nkwadebe na ịdọ aka ná ntị oge tupu ihe egwu dị na Spain.
Na-enye gị ohere ịhọrọ ozi dị na map ahụ site na ịhọrọ ndepụta nke na-egosi oké ọkọchị nke ihu igwe, oge nke ndeksi na ụbọchị. Ọ na-enyekwa ohere nhọrọ nke otu mpaghara ma nwee ike iji anya nke uche hụ iji nwee ike ịmụ ihe nke ọma.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere onye na-ekiri ọkọchị na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Ekiri Ekiri
Gịnị bụ agwaetiti